[Nkebi nke abụọ] LMDE na omimi: Mmelite sistemụ. | Site na Linux
Anyị na-aga n'ihu na nkeji nke abụọ nke LMDE juputara. Anyị ahụworị esi wụnye ya nzọụkwụ site nzọụkwụ, ma ugbu a, ọ bụ oge imelite ya iji nwee ike ịnụ ụtọ nchịkọta ọhụrụ dị.
Tupu ịmalite anyị ga-dokwuo anya na LMDE Ezubere iji nchekwa nke Nyocha Debian, na anyị ga-eji ndị ndabara ahazi na faịlụ ahụ isi mmalite.list nke di / wdg / apt /.
M na-eme ka nke a dokwuo anya, n'ihi na n'oge na-adịbeghị anya, otu nke LinuxMint, gbanwere ụfọdụ ihe na mmelite ụzọ LMDE. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmatakwu gbasara isiokwu a, ịnwere ike ị nweta ozi ndị ọzọ ugbu a njikọ a.
Ozugbo ịwụnye LMDE anyị ga-imelite ya n'ihi na .iso nke dị ruo ugbu a, ọ bụ owuwu nke ọnwa Jenụwarị ma enwere ọtụtụ nchịkọta ndị ochie. Dịka m kwuru na mbụ, anyị ga-eji nchekwa ndị na-abịa na ndabara ma hazie ya /etc/apt/sources.list.
Faịlụ kwesịrị inwe ihe ndị a na ya:
ụgwọ http://packages.linuxmint.com/ debian isi upstream mbubata
# deb http://ftp.debian.org/debian na-enyocha isi na-enye n'efu
ụgwọ http://debian.linuxmint.com/onye kachasị na-anwale na-abụghị n'efu
ụgwọ http://security.debian.org/ ule / mmelite isi na-enye n'efu
ụgwọ http://www.debian-multimedia.org na-anwale isi na-abụghị n'efu
Iji mee ka mmelite ahụ dịkwuo ụtọ maka onye ọrụ novice, anyị ga-eme ihe niile Synaptic, nke anyị na-arụ n'ime NchNhr »Ihe ngwugwu. Anyị egosiworị otu esi arụ ọrụ na ngwa ọrụ a, yabụ ọ bụrụ na ị maghị, ị gafere Ebe a.
O nwere ike ọ gaghị ajụ maka paswọọdụ anyị ka ịnwe ikike ọchịchị. Anyị agaghị eme ihe ọ bụla ọzọ, dị nnọọ pịa bọtịnụ mmelite iji malite imelite nchịkọta. Dị ka ọ nwere ezi uche, anyị ga-ejikọ na ịntanetị.
Oge usoro a ga-adabere na bandwidth anyị. Anyị amalitebeghị ịwụnye nchịkọta ọhụrụ, kama ọ na-emelite usoro nchekwa nchekwa. Ozugbo ọ gwụchara, anyị nwere ike ịhụ na Ọnọdụ ngwugwu, nke enwere ike imelite.
Naanị anyị ga-ahọrọ ha niile ma melite ha. Iji mee ọtụtụ nhọrọ, anyị kara akara nke mbụ wee pịa Ctrl + A.
Ma m na-agwa gị mee ihe ọzọ. Na nso nso a LMDE gụnyere ihe ọhụrụ Nwelite Njikwa que ọtụtụ ndozi. Ihe m na-ekwupụta bụ na, na-emelite yana Synaptic, nchịkọta metụtara LMDE.
Olee otu anyi si eme nke a? Dị mfe, anyị na-eji njin ọchụchọ, anyị na-enyocha aha na aha ahụ. Anyị na-etinye mint na mpaghara ọchụchọ wee chere ka nchịkọta niile ha nwere pụtara Mint n'aha ya.
Anyị na-akara akara nchịkọta mint iji melite. Ozugbo ọ gafere, anyị na-emechi Synaptic ma anyi meghe Nwelite Njikwa, nke dị n'ime NchNhr »Ngwa niile» Nchịkwa. Anyị na-echere ka ị budata ndokwa ntinye ederede otu ugboro ọzọ ma melite nchịkọta niile.
Ruo ugbu a okwu nke nwelite. Na nkeji na-esote anyị ga-ahụ otu esi edozi LMDE ime ka ọ rụọ ọrụ nke ọma karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » [Nkebi nke abụọ] LMDE na omimi: Mmelite sistemụ.
Ọ bụrụ na ị gbakwunye nkwụghachi mgbe ịchọrọ ịme mmelite-melite ma ọ bụ melite mmelite ọ na-agwa anyị:
Faịlụ «Hapụ» emebiela, na-eleghara anya http://debian.linuxmint.com/latest/dists/testing/InRelease
azịza ya bụ imepụta faịlụ /etc/apt/apt.conf.d/80mintupdate-debian
ma tinye n'ime:
Nweta :: Check-Valid-Ruo mgbe "ụgha";
Ugbu a ị nwere ike imelite nchekwa data na-enweghị nsogbu
Zaghachi ka mukenio
Daalụ nke ukwuu maka onyinye 😀
Hey, ekele maka ntinye ma olee otu ị si emepụta faịlụ dị otú ahụ?
M wụnyere ụdị Xfce mana enwere m nsogbu na nchịkọta. Emere m ihe niile nke post a kwuru na sistemụ m dara: ọ naghị emelitere ọzọ ọ gosipụtara njehie na njikwa mgbe m nwara iji "melite" na "nkwalite".
Ka o sina dị, aghaghị m itinye ya ọzọ ma ugbu a, m ga-akpachara anya.
Nwere ike ịmepụta ya na nchịkọta ederede ma tinye ya ebe ahụ dị ka mgbọrọgwụ. Amaghị m etu esi kee ya na ọnụ ya
Kedu mgbe ị wụnyere ụdị ahụ? Ana m echetara gị na LMDE nwere ebe nchekwa ya.
N'ime ubochi ato gara aga, a na m anwale ma lelee. Ejiri m Lxde buru uzo, mana Debian putara ma wunye Xfce. Mgbe mmebi ahụ m kọwara na nkọwa m dị n'elu, m nwara Gnome mana nrụnye ahụ amaliteghị. Enwetaghachiri m Xfce ma na-anwa iwepụ Linux Mint search na Firefox, agbagoro m usoro ahụ ọzọ. Nke a oge m reinstalled na ndị dị partitions na ebe m na-aga.
Obi dị m ezigbo ụtọ na Linux Mint 201109 maka Xfce. Nke a desktọọpụ ka mma nke ukwuu ma na-enye m ohere ịsụgharịrị ihe m jiri na Ubuntu 10.10. Dịka ọmụmaatụ, ọ kwadolarị ọtụtụ desktọọpụ na apụl dịka Gnome. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere iwepu draịva ndị dị na mpụga mfe. Naanị m na-atụ uche na Nautilus, ịpị F3 nwere ike ịrụ ọrụ na windo faịlụ abụọ n'otu.
Ihe a niile bụ akụkụ nke mmụta na njem dị egwu nke iji Linux. Anaghị m eme mkpesa banyere nsogbu ndị m tara, ha bụ akụkụ nke usoro ahụ. Kama nke ahụ, ha enyerela m aka ịmụtakwu ihe. Linux mepee uche gị n'ezie ma nye gị ohere ịnwere onwe gị.
Nke ikpe azu, achorom ikele Elav na Courage. Ana m ekele gị nke ukwuu maka okwu gị na enyemaka gị. Elav, m na-agba gị ume ka ị nọgide na-eso ndị na-asụ Spanish na-ekerịta uru niile nke Linux na, ọkachasị, Linux Mint. Are bụ akụkụ nke ndị ọrụ toro eto na ndị ọkachamara ekele onye, ​​naanị "ndị gụrụ akwụkwọ" na Linux anyị nwere ike ịtụkwasị obi ma melite arụmọrụ anyị.
Onweghi mmadu, oburu na inyem oru, odighi ihe obula mere, ya bu ihe m ji eme onwe m obi uto.
Aga m anọ gburugburu maka ihe m nwere ike inye aka
Motorola XT316 Ekwentị